Kuwani waa taleefannada leh Android One oo lagu soo bandhigay MWC 2018 | Androidsis
Eder Ferreno | | Mobiles, MWC, Noocyada Android
Android One waa mid ka mid ah mashaariicda Google ee lagu dhiirrigelinayo isticmaalka nidaamka qalliinka. Waa nooc ka mid ah nidaamka qalliinka oo ka xor ah bloatware iyo lakabaynta qaabeynta. Noocyo sida Nokia ah ayaa adeegsada. Ama taleefannada sida Xiaomi Mi A1. Hadda, inta lagu gudajiray MWC 2018 taleefano cusub ayaa lagu daray barnaamijka. Laga soo bilaabo waxa aan aragno sida Android One uu u sii ballaaranayo.
Noocyo badan iyo kuwa badan ayaa raba inay ku sharaddeeyaan taleefannada iyadoon lakabyo shaqsiyeed la socon. Iyo bilawgii MWC 2018 qaar ka mid ah taleefannada cusub ee adeegsan doona noocaan ayaa la soo saaray nidaamka hawlgalka.
Waayo, Way fiicantahay in lagu muujiyo liistada dhammaan moodooyinka cusub ee isticmaali doona Android One. Marka, adeegsadayaashu waxay wax badan ka baran karaan taleefannadan ku soo dhacaya suuqa bilaha soo socda. Fiican tahay haddii aad raadineyso taleefan bilaash ah lakabka habeynta.
4 Telefoonada kale ee Android One
Mid ka mid ah astaanta cusub ee astaanta, ayaa shalay la soo bandhigay. Taleefan ay calaamaddu ku maamuusayso taariikhdeeda oo ay fiirineyso mustaqbalka. Waxaan wajaheynaa mid ka mid ah qalabka ugu dhameystiran ee summaddu ay ka bilaabeyso suuqa. Maxaa intaa ka badan, sidii caadada u ahayd Nokia, waxay isticmaashaa Android One. Marka waxaan marwalba filan karnaa cusbooneysiin deg deg ah.
Ta labaad waxay timaaddaa taleefanka cusub ee sumadda leh. Waa qalab leh wax kasta oo lagu guuleysto dadka isticmaala. Laga soo bilaabo naqshad casri ah illaa qeexitaanno wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer, xaqiiqda ah inaad isticmaasho Android One sidoo kale waxay hubineysaa inaad si dhakhso leh u cusbooneysiin doonto. Sidoo kale a joogitaanka kaaliyaha Google ee qalabka. Marka isticmaaleyaashu waxay yeelan doonaan dhammaan faa'iidooyinka.
Kaalinta seddexaad waa nooca dhexe ee astaanta. Telefoon suuqa ku gaadha qayb adag laakiin ay sumaddu si fiican u qabato. Marka waxaa hubaal ah in wax badan laga heli karo dadka isticmaala. Telefoon ku sharaddeeya naqshad iyo a processor tayo leh sida Snapdragon 630. Ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay kuwa doonaya taleefan leh mid ka mid ah Android oo ka qiimo jaban.
Telefoonada kale ee Android One
Seddexdan ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee ka tirsan qoyska Android One.Inkastoo ay jiraan taleefano kale oo sidoo kale la heli karo maanta. Marka waxaan aragnaa sida qoysku u korayo. Waxaan helnaa moodello sida Xiaomi Mi A1, HTC U11 Life ama Moto X4 oo iyaga ka mid ah.
Waxaan sidoo kale ka heli dhowr moodel oo Sharp ah oo liiska ku jira. Motorola ka sokow. Waxa aan ka arki karno inay jiraan waxyaabo badan oo kala duwan oo ka tirsan Android One. Waxaa laga yaabaa inaan ogaanno taleefano badan maalmaha soo socda, markaa liiska waan cusbooneysiin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Ma waxaad raadineysaa taleefan wata Android One? Kuwani waa kuwa lagu soo bandhigay MWC 2018
Leagoo wuxuu ku soo bandhigayaa MWC Leagoo S9, isku-xidhka koowaad ee iPhone X iyo Leagoo Power 5 oo leh 7.000 mAh baytari